Tecno ရဲ့ Camon 16 Premier ဟာ Mi-range ထဲမှာရှေးခယျြသငျ့တဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈနမေလား?? — Anycall Mobile
Tecno ရဲ့ Camon 16 Premier ဟာ Mi-range ထဲမှာရှေးခယျြသငျ့တဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈနမေလား??
By liam September 12, 20204Mins Read
Tecno Pouvoir4Series နဲ့ဈေးကှကျထဲမှာနာမညျရခဲ့တဲ့ Tecno ကတော့သူတို့ရဲ့ နောကျထပျ Series အသဈကို ဈေးကှကျထဲမှာရောငျးခဖြို့အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။ ဒီ Series အသဈကတော့ Camon 16 series ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ Series ထဲမှာတော့ Camon 16, Camon 16 Pro နဲ့ Camon 16 Premier တို့ပါဝငျထားပါတယျ။ ဒီထဲက Camon 16 Premier ကတော့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံကိုမကွာခငျမှာရောကျရှိလာတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဆိုတော့ ဖုနျးဟာဈေးတနျတနျနဲ့ ဘယျလို Specs တှကေိုပေးထားလမေလဲ??
Camon 16 Premier Design
ဖုနျးကိုစကိုငျလိုကျနဲ့ ကြောဘကျမှာ စတုရနျး ပုံစံ Camera Setup ကို ခပျကွီးကွီးတပျဆငျပေးထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဖုနျးရဲ့ရှဘေ့ကျမှာတော့ Selfie Camera နှဈလုံးပါဝငျတဲ့ ဆေးတောငျ့ပုံစံ Punch Hole ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ Back Design ကတော့ Glass လို့ထငျရပမေယျ့လညျး Plastic Back ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယျ။
Volume ခလုတျ နဲ့ Side-mounted Fingerprint Scanner ပါတဲ့ Power ခလုတျကိုတော့ ဖုနျးရဲညာဘကျမှာတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့အောကျခွမှောတော့ ထုံးစံအတိုငျး 3.5mm နားကွပျပေါကျ ၊ USB-C Port နဲ့ Speaker ကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒီမှာ Tecno Pouvoir4Pro မှာပါခဲ့တဲ့ Stereo Speakers တော့ပါမလာတော့ပါဘူး။
Display မှာတော့ 6.9-inch LCD Full HD+ Display ကိုသုံးပေးထားပါတယျ။ ဒီ Display ဟာဆိုရငျ 90Hz Refresh Rate ကိုထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီလို Mid-range ဖုနျးတဈလုံးမှာ 90Hz ထောကျပံ့ပေးလာတာကတျောတျောလေးအားရစရာပါ။ နောကျထပျ HDR10+ ကိုလညျးထောကျပံ့ပေးထားတာမို့လို့ ဖုနျး Display ရဲ့အရောငျစိုစှတျမှုတှဟောလညျး ပိုကောငျးလာမှာပါ။
Camera အတှကျ Quad Camera Setup ထဲမှာ 64 MP Sony IMX686 Main Sensor ၊ 8 MP Ultra Wide-Angle Camera ၊ 2MP Depth Sensor ၊ 2MP Video Camera တို့ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ ဒီ Sony IMX686 64MP Sensor ဟာ Redmi K30 မှာသုံးပေးထားတဲ့ Sensor ပါ။ ဆိုတော့ Camera ပိုငျးမှာ K30 လိုပဲစှမျးဆောငျနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Selfie မှာတော့ Punch-hole ထဲမှာ 48 MP,(wide) + 8 MP (ultrawide) တို့ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ဒီမှာ 48MP Selfie ကိုသုံးထားက တျောတျောလေးတော့ အံအားသငျ့စရာပါ။ ဒီ 48MP Selfie ဟာ ဘယျလောကျထိမြား စှမျးဆောငျပေးနိုငျမလဲ?? စိတျဝငျစားဖို့တော့ကောငျးနပေါပွီ။
Video မှာတော့ 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps Videos တှကေိုရိုကျပေးနိုငျမှာပါ။
Performance မှာ MediaTek ရဲ့ Gaming အသားပေး Chip တဈခုဖွဈတဲ့ Helio G90T နဲ့ အားဖွညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီမှာ Helio G90T Chip ဟာ အနညျးငယျတော့ ဟောငျးနပေမေယျ့လညျး Gaming Performance ကတော့ တျောတျောလေးကောငျးတာကို Redmi Note 8 Pro Users တှသေိပွီးဖွဈမှာပါ။ ပူတာလေးကလှဲလို့ပေါ့ :3
ဒီ Chip ကိုတော့ 8 GB RAM ၊ 128 GB Internal Storage တို့နဲ့တှဲပေးလာမှာပါ။
Software အတှကျ Android 10 အပျေါအ‌ခွခေံထားတဲ့ HIOS 6.0 နဲ့ Run ပေးလာဖို့ရှိနပေါတယျ။
Battery မှာတော့ 33W Fast Charging ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ 4,500 mAh battery ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ 33W Fast Charging ကွောငျ့ 70% ကို မိနဈ ၃၀ အတှငျးမှာအားဖွညျ့ပေးနိုငျမယျလို့ Tecno ကဆိုထားပါတယျ။
ဈေးအနနေဲ့ Tecno Camon 16 Premier ဟာ 8 GB RAM ၊ 128 GB Internal Storage ကို Euro 230 (မွနျမာငှေ သုံးသိနျး ၇ သောငျးဝနျးကငျြ) ကသြငျ့လာနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဆီကို ရောကျလာမယျ့ဈေးကိုတော့သခြောမသိရသေးပါဘူး။
အခြုပျအနနေဲ့ ဒီလို Specs တှနေဲ့ Tecno ဟာ Mid-range ထဲမှာရှေးသငျ့တဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာလမေလား??
အသစ်ထွက်လာမယ့် Tecno ရဲ့ Camon 16 Premier ဟာ Mi-range ထဲမှာရွေးစရာများဖြစ်နေမလား??
Tecno Pouvoir4Series နဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ရခဲ့တဲ့ Tecno ကတော့သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ် Series အသစ်ကို ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီ Series အသစ်ကတော့ Camon 16 series ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series ထဲမှာတော့ Camon 16, Camon 16 Pro နဲ့ Camon 16 Premier တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီထဲက Camon 16 Premier ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုမကြာခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဖုန်းဟာဈေးတန်တန်နဲ့ ဘယ်လို Specs တွေကိုပေးထားလေမလဲ??
ဖုန်းကိုစကိုင်လိုက်နဲ့ ကျောဘက်မှာ စတုရန်း ပုံစံ Camera Setup ကို ခပ်ကြီးကြီးတပ်ဆင်ပေးထားတာကို
တွေ့ရမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ Selfie Camera နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ ဆေးတောင့်ပုံစံ Punch Hole ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Back Design ကတော့ Glass လို့ထင်ရပေမယ့်လည်း Plastic Back ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်။
Volume ခလုတ် နဲ့ Side-mounted Fingerprint Scanner ပါတဲ့ Power ခလုတ်ကိုတော့ ဖုန်းရဲညာဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း 3.5mm နားကြပ်ပေါက် ၊ USB-C Port နဲ့ Speaker ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီမှာ Tecno Pouvoir4Pro မှာပါခဲ့တဲ့ Stereo Speakers တော့ပါမလာတော့ပါဘူး။
Display မှာတော့ 6.9-inch LCD Full HD+ Display ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ ဒီ Display ဟာဆိုရင် 90Hz Refresh Rate ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒီလို Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာ 90Hz ထောက်ပံ့ပေးလာတာကတော်တော်လေးအားရစရာပါ။ နောက်ထပ် HDR10+ ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတာမို့လို့ ဖုန်း Display ရဲ့အရောင်စိုစွတ်မှုတွေဟာလည်း ပိုကောင်းလာမှာပါ။
Camera အတွက် Quad Camera Setup ထဲမှာ 64 MP Sony IMX686 Main Sensor ၊
8 MP Ultra Wide-Angle Camera ၊ 2MP Depth Sensor ၊ 2MP Video Camera တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Sony IMX686 64MP Sensor ဟာ Redmi K30 မှာသုံးပေးထားတဲ့ Sensor ပါ။ ဆိုတော့ Camera ပိုင်းမှာ K30 လိုပဲစွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Selfie မှာတော့ Punch-hole ထဲမှာ 48 MP,(wide) + 8 MP (ultrawide) တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာ 48MP Selfie ကိုသုံးထားက တော်တော်လေးတော့ အံအားသင့်စရာပါ။ ဒီ 48MP Selfie ဟာ ဘယ်လောက်ထိများ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲ?? စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီ။
Video မှာတော့ 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps Videos တွေကိုရိုက်ပေးနိုင်မှာပါ။
Performance မှာ MediaTek ရဲ့ Gaming အသားပေး Chip တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Helio G90T နဲ့ အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာ Helio G90T Chip ဟာ အနည်းငယ်တော့ ဟောင်းနေပေမယ့်လည်း Gaming Performance ကတော့ တော်တော်လေးကောင်းတာကို Redmi Note 8 Pro Users တွေသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ပူတာလေးကလွှဲလို့ပေါ့ :3
ဒီ Chip ကိုတော့ 8 GB RAM ၊ 128 GB Internal Storage တို့နဲ့တွဲပေးလာမှာပါ။
Software အတွက် Android 10 အပေါ်အ‌ခြေခံထားတဲ့ HIOS 6.0 နဲ့ Run ပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
Battery မှာတော့ 33W Fast Charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4,500 mAh battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ 33W Fast Charging ကြောင့် 70% ကို မိနစ် ၃၀ အတွင်းမှာအားဖြည့်ပေးနိုင်မယ်လို့ Tecno ကဆိုထားပါတယ်။
ဈေးအနေနဲ့ Tecno Camon 16 Premier ဟာ 8 GB RAM ၊ 128 GB Internal Storage ကို Euro 230 (မြန်မာငွေ သုံးသိန်း ၇ သောင်းဝန်းကျင်) ကျသင့်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်လာမယ့်ဈေးကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။
အချုပ်အနေနဲ့ ဒီလို Specs တွေနဲ့ Tecno ဟာ Mid-range ထဲမှာရွေးသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာလေမလား??
Camon 16 PremierTecno